Maninona ny eTN no niditra ho mpikambana ao amin'ny Fikambanana fizahan-tany Karaiba amin'ity herinandro ity?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maninona ny eTN no niditra ho mpikambana ao amin'ny Fikambanana fizahan-tany Karaiba amin'ity herinandro ity?
Fizahan-tany azo idirana • Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Jolay 29, 2018
Androany, nanatevin-daharana tamin'ny fomba ofisialy ny masoivoho fampandrosoana ny fizahantany, ny Caribbean Tourism Organization (CTO), ny eTN Corporation.
eTN Corporation, ny tompon'ny eTurboNews niditra ho mpikambana tamin'ny fomba ofisialy ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) tamin'ity herinandro ity.
The Fikambanana fizahan-tany any Karaiba dia masoivoho fampandrosoana ny fizahantany misy mpikambana 24 ao amin'ny firenena holandey, anglisy, espaniôla ary frantsay miaraka amina mpikambana marobe ao amin'ny sehatra tsy miankina. Ny vinan'ny CTO dia ny fametrahana ny Karaiba toy ny toerana mahafinaritra indrindra, mandavantaona, toetrandro mafana amin'ny fialantsasatra. Ny tanjon'izany dia tarihin'ilay foto-kevitry ny fizahan-tany fizahan-tany maharitra. Ny CTO dia monina any Barbados miaraka amin'ireo birao any New York sy London.
eTN Corporation no tompony eTurboNews ankoatry ny famoahana boky marobe hafa izay manantona ireo matihanina amin'ny dia, mpanjifa ary ny haino aman-jery manerana izao tontolo izao. Ankoatry ny eTurboNews.com, eTurboNews.eu misy Etn.travel (Indostrian'ny fizahantany manerantany), eturbonews.com (Fanontana amin'ny fiteny alemanina), forim Mediaterelease.net (serivisy tariby ho an'ny mpanao gazety), www.indostreamix.tv (ho an'ny mpiasan'ny dia), fivoriana.travel (fivoriana / indostria MICE), aviation.travel (vaovaon'ny fiaramanidina), pelebourism.travel (Mpandeha LGBT), donnaharket.com (vaovao momba ny fizahan-tany ambony sy ny fizahan-tany fizahan-tany, toa ny UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP), travelwirenews.com (loharanom-baovao momba ny fizahantany, mpamaky mahazatra), divay.travel (divay sy vaovao momba ny sakafo), ary hawaiinews.online (Hawaii manokana).
ny eTN dia manana foibe any Hawaii, USA misy birao na solontena ao California, Florida, New York, Texas, Australia, Czech Republic, HongKong, Jamaica, Jordania, India, Indonesia, Israel, Italy, Peru, Poland, Africa South, Korea South, Spain, Thailand, Tanzania, Uganda, UAE, Seychelles, Zimbabwe. eTurboNews Alemana dia any Duesseldorf sy Hamburg. Ankoatry ny, eTurboNews manana ambasadaoro any amin'ny firenena maherin'ny 100.
Manana ny orinasa ihany koa TravelMarketingNetwork, vondrona mpampianatra marketing manokana avy amin'ny sehatra samihafa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany. Ity tambajotra ity dia consultancy an'ny fifandraisana amin'ny daholobe mifantoka manokana amin'ny filan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manome vahaolana PR namboarina sy torohevitra momba ny varotra sy ny marika ho an'ireo orinasa miasa amin'ny fizahan-tany, fitaterana ary orinasa mifandraika amin'ny fizahantany.
eTN dia mpikambana mpanorina ary hery lehibe ao aoriany ICTP (The International Coalition of Tourism Partners) ary ilay vao natsangana Birao fizahantany afrikanina.
Juergen Steinmetz, filoha eTN Corporation
Mpamoaka eTN sy ny filoha Juergen Steinmetz dia nilaza hoe: “Nandritra ny taona maro, ny eTN dia nandrakotra vaovao momba an'i Karaiba ary koa ireo olana mifandraika amin'ny faritra amin'ny antsipiriany. Niara-niasa tamina hetsika marobe tany Karaiba ny eTN, ao anatin'izany ny UNWTO Global Conference momba ny asa sy ny fitomboana ao Jamaika.
“Fotoana hiaraha-miasa amin'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba ary hiara-hiasa amin'ireo mpikambana ao aminy mba hananan'izy ireo fidirana tsara kokoa amin'ny tambajotranay midadasika, ary hanatsara ny fivoaran'ny fizahan-tany any Karaiba.
"Faly izahay fa tafiditra ao amin'ny tsara indrindra maneho ny tsara indrindra amin'ny fizahan-tany Caribbean Travel and fizahantany amin'ny alàlan'ny Caribbean Tourism Organization."
eTurboNews dia naorina tamin'ny taona 1999 ary loharanom-pahalalana azo antoka ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany mandritra ny 19 taona, ary ny hany fanontana manerantany manolotra vaovao momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany amin'ny 24/7. Amin'ny alàlan'ny mpamaky, fiaraha-miasa, ary fikarohana, toerany ary tamba-jotra sosialy midadasika eTurboNews ahitam-bidy mitambatra dia misy 230,000 ireo matihanina amin'ny indostrian'ny dia, mpanao gazety 17,000, ary mpanjifa antonony 1.3 tapitrisa.
eTurboNews mbola tsy fantatra amin'ny tolotra molotra, fa ny mpamaky fandrakofana henjana sy masiaka dia tia mahita.
eTN tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny haino aman-jery an-tserasera. Mpamoaka eTN Juergen Steinmetz nilaza:
"Tsy mino ny fahalalahana izahay"haino aman-jery nahazo”Ho toy ny fomba hananana ny ekipa mpampanonta antsika miasa mafy hanome fandrakofana maimaimpoana ho an'ny tanjona ara-barotra na fampiroboroboana.
Manana faktiora aloa izahay.
Tsy manaiky fitsangantsanganana famarotana, varotra na tapakila ho valin'ny dokambarotra izahay.
Izahay dia tsy manome antoka ny fandrakofana amin'ny safidy malalaka azonay.
Izahay dia mametra ny atiny, ny tratrany, ny fampidirana ary ny fanatrarana ireo safidy maimaimpoana momba ny fandrakofana, ao anatin'izany ny fametrahana paywalls amin'ny lahatsoratra.
Tsy manantena izahay na iza na iza, ao anatin'izany ireo masoivohon'ny PR hiasa maimaimpoana, tsy azontsika atao ve izany.
90% ny votoatinay dia tsy manana fikasana ara-barotra ary mamporisika ny mpamaky izahay mba hampitandrina anay amin'ny famoahana vaovao, hevitra momba ny tantara ary ahiahy.
10% ny atinay dia haino aman-jery karama. Ny haino aman-jery efa niasa dia singa iray lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fidiram-bola sy ny fanentanana ny marika na aiza na aiza toerana fitsangatsanganana na orinasa - ary ny sehatra misy anay dia mety amin'ny fiainana talantalana lava, fidirana malalaka, fampidirana haino aman-jery sosialy, ary eo noho eo. vokany, na amin'ny lafiny isam-paritra na manerantany. Tsy mino lahatsoratra avo lenta izahay sy dokam-barotra amin'io pejy io ihany mba hanovana. Tianay ny mpamaky mba hijery tsara sy hanokatra lahatsoratra ary tsy hanaja fanajana ny toe-java-misy.
Tianay ny mametraka fiaraha-miasa ara-barotra miaraka amin'ny toeran-kaleha, hetsika ary ny mpiray antoka aminy mivantana na amin'ny alàlan'ny maso ivoho PR.
“Amin'ny fidirana amin'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba dia manantena izahay fa hamorona fiaraha-miasa fandresena / fandresena vaovao, hitondra ny sasany amin'ny hetsika ataonay any amin'ny faritra, ary hianatra bebe kokoa momba ny tena olana mifandraika amin'ny Karaiba, ary hampiditra ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fomba fisainantsika eran'izao tontolo izao.
“Manantena ny hanatrika ny ho avy aho SOTIC (State of the Tourism Industry Conference) any Bahamas, 1/5 Oktobra. ”